डुङ्गा, पौडी र पानी खेल | Holmbygden.se
को Holmsjön वरिपरि धेरै ठाउँमा सुखद sommarbad लागि धेरै राम्रो बलौटे समुद्री तट हो. सबैभन्दा भ्रमण Västbyn र Sandnäset छ.
Sandnäset मा यो जेट skis भाडामा पनि सम्भव छ, र अन्य गतिविधिहरु को एक किसिम.
बोटिङ मन गर्नेहरूका लागि Holmsjön क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो ताल छ, तीन Mil लामो र 39 km² म क्षेत्र. ताल राम्रो पानी स्किइङ वा Wakeboarding मा व्यापक पालैपालो लागि उपयुक्त छ. धेरै बासिन्दा र गर्मी घरेलु अतिथि यस गर्मी आफ्नो डुङ्गा सुरु गर्न चयन.
Holm जिल्ला का पानी माछा नक्सा हेर्न र Holms माछा मार्ने थप पढ्नुहोस् यहाँ.
एक हल्का डुङगा मा आरामपूर्वक सवारी लागि मूड मा (क्यानाडा) कुनै पनि watercourses. त्यसपछि Österström मा भाडामा समुद्री डुङ्गा छन्. दर र सम्पर्क जानकारी हेर्नुहोस्.
Holmsjön मा वर्तमान पानी स्तर
छिमेकी ताल Leringen शक्ति उद्योग को लागि एक ठूलो पानी जलाशय गठन संग Holmsjön र पावर प्लान्ट Leringsforsens द्वारा नियमन (यहाँ .pdf मा पानी प्रवाह को स्केच).
गर्मिहरु बारे Holm समुद्र पानी स्तर 201 समुद्र स्तर माथि मीटर र बारेमा गर्न तल जाडो कम 197 m.ö.h.
यहाँ आज पानी स्तर हेर्न.
स्रोत: पानी नियन्त्रण कम्पनीहरु.
Holm लेक आधार संग समुद्र नक्शा
सबै पोखरी मा रूपमा छालहरू वा बरफ मा बाहिर जान्न उपयोगी हुन सक्छ कि कुनै पनि आधार हो. तपाईं Holmsjön र यसको जग नक्सा हेर्न सक्नुहुन्छ तल, र नक्सा आफ्नो जीपीएस मा प्रयोग गर्न ट्रयाकहरू डाउनलोड, Eller स्मार्टफोन navigationsutrustning.
(के तपाईं आफ्नो ब्राउजर को एक पहेलो पट्टी शीर्ष / तल दायाँ क्लिक गर्ने र चयन गर्नुपर्ने हुन सक्छ, नक्सा तल देख्न “अवरुद्ध सामग्री शो” वा “अनुमति”.)
छ पूर्ण स्क्रिनमा समुद्र चार्ट वा खुला Google नक्सामा नक्सा (धेरै पृष्ठ).
आफ्नो स्थिति संग मोबाइल को चार्ट
आफ्नो जीपीएस स्थान पालना र चित्रण गरिएको फोन Google नक्सा प्रयोग किनभने हेर्न.
1. जीपीएस सक्रिय:एन म din कार स्मार्टफोन (iphone / एन्ड्रोइड).
2. आफ्नो मोबाइल ब्राउजरमा माथिको ठेगाना प्रविष्ट.
3. यो एक बाकस माथि आउँछ भने “प्रयोग गरेर कारबाही पुरा”, यस मामला मा, “नक्सा”.
अब तपाईं Holm लेक आधार देख्न सक्नुहुन्छ, तटरेखा र मोबाइल फोन मा आफ्नो स्थिति.
जीपीएस लागि विभिन्न स्वरूप मा ट्रयाक फाइलहरू डाउनलोड:छ. उच्च क्लिक, “सेव लक्ष्य रूपमा…”.
जीपीएस आदान प्रदान – Holmsjons_grund_(120912).GPX (0,7एमबी)
MapSource – Holmsjons_grund_(120912).GDB (0,1 एमबी)
गुगल अर्थ – Holmsjons_grund_(120912).KML (0,2एमबी)
गुगल अर्थ – Holmsjons_grund_(via_internet).KML (0,1एमबी) अनलाइन नक्सा पढ्दै.
नक्सामा थप, र ट्रयाक म्याप
Holm लेक आधार एक जीपीएस ट्रयाक छ (s.k. “ट्रयाक”) कि ताल गरेको विभिन्न आधार र तटरेखा चिनारी. ट्रयाकको जीपीएस वा स्मार्टफोन फोन संग संयोजन गर्न सक्छन् चट्टानको वा पातलो बरफ बच्न किनभने डुङ्गा को र हिउँदमा बच्न प्रयोग गर्मिहरु. लाइनहरु जोगिन र भ्रमण सुरक्षित हुनेछ! तपाईं फेरि ताल मा एक जग फेला पार्न चाहनुहुन्छ भने पनि माछा मार्ने गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ.
Holmsjön नियमन र हिउँदमा पानी प्रशस्त गिरा छ. Kart ट्रयाक ताल गरेको shorelines जाडो साथ स्नोमोबाइल गरेको छ. समयमा (मंगल 2008) ताल बारेमा कम थियो4पानी गर्मी तुलना हूँ. किनभने जोगिन गर्न ट्रयाक मा नेभिगेट यदि देश राम्रो मार्जिन छ. ताल पूर्ण डेलाईट छ जब उत्कृष्ट जग केही पाठ्यक्रम पूर्ण अझै पर्याप्त गहिरो मा पारित गर्न सक्छ.
ट्रयाकको Patrik Wikholm द्वारा सिर्जना गरिएको छ. डिजिटल ट्रयाक प्रक्रिया र Niklas Wikholm को प्रकाशन. त्रुटिहरू विषय.
queuing को खतरा फर्श काम कारण. यातायात ... थप पढ्नुहोस्